Iklayenti leSteam leLinux manje selingaqalisa imidlalo esitsheni esikhethekile | Kusuka kuLinux
El Iklayenti le-Valve Steam Beta le-Linux ingeze indlela entsha yokusebenzisa amagama wamavidiyo ku-distro yakho ye-GNU / Linux, futhi ikwenza lokho ngesiqukathi esikhethekile. Yinto ebivele ikhonjwa isikhashana, selokhu kwasetshenziswa umtapo wezincwadi omusha weSteam. Manje ungasebenzisa lesi sici ngokufaka iSteam Linux Runtine kusuka kumenyu yamathuluzi amaklayenti wegeyimu yevidiyo.
Lesi sici esisha sithakazelisa kakhulu, yize sihlolwa. Futhi kuyathakazelisa lokho ngoba behlukanisa kangcono imidlalo yevidiyo ohlelweni lokusingathwa njengoba abathuthukisi bakaSteam bakaValve bephawule, ikakhulukazi uTimothee Besset. Lokhu kuzosiza iValve ukubeka izihloko ezindala zemidlalo ekusakazweni okusha (ngemitapo yolwazi emisha kanye nabahlanganisi) kukhathalogi yayo, okuvumela abathuthukisi ukuthi bahlole kalula indalo yabo futhi banciphise nesikhathi sabasebenzi.
Ukuyisebenzisa, njengoba ngishilo, ungayisebenzisa ku-Steam iklayenti le-Linux. Ukuze wenze lokhu, unga landela lezi zinyathelo:
Uma unayo I-Valve Steam efakwe kwi-distro yakho, vula iklayenti.
Bese uye kumenyu yamathuluzi we-Steam bese uqinisekisa ukuthi ufake i-Steam Linux Runtine. Uma kungenjalo, chofoza inkinobho yokufaka ukwenza kanjalo.
Ngemuva kwalokho, kuzakhiwo zomunye wemidlalo yevidiyo, phoqelela le runtine kusuka kumenyu ngendlela efanayo lapho uphoqa ukusebenzisa uhlobo oluthile lwephrojekthi ye-Proton.
Khona-ke qala kabusha umusi.
Nakhu ukuthi ingasetshenziswa kanjani kulowo mdlalo wevidiyo ...
By indlela uma ungazi uSteam, ungathola imininingwane kuwebhusayithi esemthethweni yeValve, futhi uyilande yona yakho ukufakwa kusuka lapha. Ngaleli klayenti leValve, ngeke nje ukwazi ukuthenga nokudlala ikhathalogi yayo ebanzi yemidlalo yamavidiyo yomdabu yeLinux, kepha futhi uzodlala imidlalo yamavidiyo yomdabu yeWindows sibonga iProton, uxoxe nabanye abadlali, usakaze, uphathe abalawuli, njll.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » Iklayenti leSteam leLinux manje selingaqalisa imidlalo yevidiyo esitsheni esikhethekile